Inqubomgomo yobumfihlo - IDolobha IFOMU LOKWAKHA → Izakhiwo Ezincane Zasemadolobheni ☆ Metalco ☆ Bellitalia
Umgomo wobumfihlo namakhukhi ("Inqubomgomo Yobumfihlo")
Le Nqubomgomo Yobumfihlo iyisibonakaliso sokunakekela amalungelo abavakashi kuwebhusayithi nokusebenzisa izinsizakalo ezinikezwa ngayo. Futhi kungukugcwaliseka kwesibopho sokwaziswa ngaphansi kwe Art. I-13 yoMthethonqubo (i-EU) ka-2016/679 wePhalamende laseYurophu kanye noMkhandlu wangomhla zingama-27 ku-Epreli 2016 ngokuvikelwa kwabantu maqondana nokucutshungulwa kwemininingwane yomuntu uqobo kanye nokuhamba ngokukhululeka kwale datha, kanye nokuphinda ku-Directive 95/46 / EC (umthetho jikelele ngokuvikelwa idatha yomuntu siqu) (I-Journal of Laws UE L119 kaMeyi 4.05.2016, 1, k. XNUMX) (ngemuva kwalokho kubizwa nge-GDPR).
Umnikazi wewebhusayithi ubhekisisa ngokukhethekile ukuhlonipha ubumfihlo babasebenzisi bewebhusayithi. Imininingwane etholwe njengengxenye yewebhusayithi ivikelwe kakhulu futhi ivikelekile ekufinyeleleni kwabantu abangagunyaziwe. Umgomo wobumfihlo wenziwa utholakale kubo bonke abathintekayo. Iwebhusayithi ivulekile.
Umnikazi wewebhusayithi uqinisekisa ukuthi inhloso yakhe enkulu yokuhlinzeka abantu ngokusebenzisa iwebhusayithi ukuvikela ubumfihlo okungenani okungenani okuhambisana nezidingo zomthetho osebenzayo, ikakhulukazi izinhlinzeko ze-GDPR kanye noMthetho kaJulayi 18, 2002 ekuhlinzekweni kwezinsizakalo zikagesi.
Umnikazi wewebhusayithi angaqoqa idatha yomuntu siqu neminye imininingwane. Ukuqoqwa kwale mininingwane kwenzeka, kuya ngemvelo yabo - ngokuzenzakalelayo noma ngenxa yezenzo zezivakashi eziya kuwebhusayithi.
Umuntu ngamunye usebenzisa iwebhusayithi nganoma iyiphi indlela amukela yonke imithetho equkethwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo. Umnikazi wewebhusayithi unelungelo lokwenza ushintsho kulo mbhalo.
Imininingwane ejwayelekile, amakhukhi
Umnikazi kanye no-opharetha wewebhusayithi yi-Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nehhovisi lakhe elibhalisiwe eWarsaw, ikheli: ul. UFort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, wangena kwirejista yabosomabhizinisi bamarejista wenkantolo kaZwelonke agcinwe yiNkantolo yesiFunda eWarsaw, uMnyango Wezentengiselwano Werejista Yezwe Kazwelonke, ngaphansi kwenombolo KRS: 0000604168, inombolo ye-NIP: 5213723972, inombolo ye-REGON: 363798130. Ngokuhambisana Imithetho ye-GDPR, umnikazi wewebhusayithi ubuye abe NguMqondisi Wedatha Yabasebenzisi bewebhusayithi ("Administrator").
Njengengxenye yemisebenzi eyenziwe, Administrator usebenzisa amakhukhi ngendlela yokuthi abuke futhi ahlaziye ithrafikhi ekhasini lamawebhusayithi, futhi enze imisebenzi yokuphindisela, noma kunjalo, njengengxenye yalezi zinto, Umphathi awucubangi imininingwane yomuntu uqobo ngaphakathi kwencazelo ye-GDPR.
Iwebhusayithi iqoqa imininingwane ngabasebenzisi bewebhusayithi nokuziphatha kwabo ngale ndlela elandelayo:
iwebhusayithi iqoqa ngokuzenzakalelayo imininingwane ekuqukethwe amakhukhi.
ngemininingwane efakwe ngokuzithandela ngabasebenzisi bewebhusayithi, amafomu atholakala ekhasini lewebhusayithi.
ngokuqoqwa ngokuzenzakalelayo kwamalogi wewebhu wewebhu ngumhlinzeki wokusingatha.
Amafayela amakhukhi (abizwa ngokuthi "amakhukhi") ayidatha ye-IT, ikakhulukazi amafayela wombhalo, agcinwe kudivayisi yokugcina yomsebenzisi wewebhusayithi futhi enzelwe ukusebenzisa amakhasi wewebhusayithi. Amakhukhi ngokuvamile aqukethe igama lewebhusayithi avela kuyo, isikhathi sokugcina kudivayisi yokugcina nenombolo eyingqayizivele.
Ngesikhathi sokuvakashela iwebhusayithi, imininingwane yabasebenzisi bewebhusayithi ingaqoqwa ngokuzenzakalela, ephathelene nokuvakasha komsebenzisi okunikezwe iwebhusayithi, kufaka phakathi, phakathi kwabanye, Ikheli le-IP, uhlobo lwesiphequluli sewebhu, igama lesizinda, inani lokubukwa kwamakhasi, uhlobo lohlelo lokusebenza, ukuvakasha, ukulungiswa kwesikrini, inombolo yemibala yesikrini, amakheli amawebhusayithi lapho iwebhusayithi ifinyeleleke khona, isikhathi sokusebenzisa iwebhusayithi. Le mininingwane akuyona imininingwane yomuntu uqobo, futhi ayikuvumeli ukukhonjwa komuntu osebenzisa iwebhusayithi.
Kungahle kube nokuxhumeka kwamanye amawebhusayithi ngaphakathi kuwebhusayithi. Umnikazi wewebhusayithi akabophezeli emisebenzini yobumfihlo yalawa mawebhusayithi. Ngasikhathi sinye, umnikazi wewebhusayithi ukhuthaza umsebenzisi wewebhusayithi ukuthi afunde inqubomgomo yobumfihlo esungulwe kula mawebhusayithi. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ayisebenzi kwamanye amawebhusayithi.
Umnikazi wewebhusayithi yibhizinisi elibeka amakhukhi kudivayisi yokusebenzisa iwebhusayithi bese lithola ukungena kuyo.
ukulungisa okuqukethwe kwamakhasi e-webhusayithi okuthandwa ngabasebenzisi bewebhusayithi nokwenza kube lula ukusetshenziswa kwamawebhusayithi; ikakhulukazi, lawa mafayela avumela ukuqaphela insiza yomsebenzisi wewebhusayithi futhi akhombise kahle iwebhusayithi, ehambisana nezidingo zakhe ngamunye,
ukudala izibalo ezisiza ukuqonda ukuthi abasebenzisi bewebhusayithi bawasebenzisa kanjani amawebhusayithi, okuvumela ukuthuthukisa ukwakheka kwabo nokuqukethwe,
ukugcina isikhathi somsebenzisi wewebhusayithi (ngemuva kokungena ngemvume), ngenxa yokuthi akudingeki ukuthi afake kabusha igama lakhe lokungena nephasiwedi kukho konke ukufakwa kwewebhusayithi.
Iwebhusayithi isebenzisa lezi zinhlobo ezilandelayo zamakhukhi:
Amakhukhi "Ayimfuneko", anika amandla ukusetshenziswa kwamasevisi atholakala kuwebhusayithi, isb. Amakhukhi wokuqinisekisa,
amakhukhi asetshenziselwa ukuqinisekisa ukuphepha, isb. asetshenziselwa ukuthola ukuhlukunyezwa,
Amakhukhi "Performance", asetshenziselwa ukuthola ulwazi ngokusetshenziswa kwamakhasi wewebhusayithi ngabasebenzisi bewebhusayithi,
Amakhukhi "Okukhangisa", anika amandla abasebenzisi bewebhusayithi ukuhlinzeka ngokuqukethwe okukhangayo okwenzelwe izifiso zabo,
"Amakhukhi" aSebenzayo, anika amandla "ukukhumbula" amasethingi akhethwe ngumsebenzisi wewebhusayithi futhi azivumelanise nezimo newebhusayithi yomsebenzisi wewebhusayithi, isib ngokuya ngolimi olukhethiwe.
Iwebhusayithi isebenzisa izinhlobo ezimbili eziyisisekelo zamakhukhi: amakhukhi weseshini namakhukhi aphikelelayo. Amakhukhi weseshini amafayili esikhashana agcinwe kudivayisi yokugcina aze ashiye iwebhusayithi, ukuphuma ngemvume ngumsebenzisi wewebhusayithi noma ukucisha isoftware (isiphequluli sewebhu). Amakhukhi aqhubekayo agcinwa kudivayisi yokugcina yomsebenzisi wewebhusayithi yesikhathi esichaziwe kumapharamitha wefayili yekhukhi noma aze asuswe umsebenzisi wewebhusayithi.
Ezimweni eziningi, isoftware esetshenziselwa ukuphequlula amawebhusayithi ngokuzenzakalelayo ivumela amakhukhi ukuthi agcinwe kudivayisi yokugcina yomsebenzisi wewebhusayithi. Abasebenzisi bewebhusayithi banenketho yokushintsha izilungiselelo zamakhukhi nganoma yisiphi isikhathi. Lezi zilungiselelo zingashintshwa ekukhetheni isiphequluli sewebhu (isoftware), phakathi kokunye, ngendlela evimbela ukuphathwa okuzenzakalelayo kwamakhukhi noma kuphoqa umsebenzisi wewebhusayithi ukuthi aziswe noma nini amakhukhi lapho efakwa kudivayisi yawo. Imininingwane enemininingwane ngamathuba nezindlela zokuphatha amakhukhi iyatholakala kuzilungiselelo zesiphequluli sewebhu.
Imikhawulo ekusetshenzisweni kwamakhukhi ingathinta okunye kokusebenza okutholakalayo kumakhasi e-webhusayithi.
Amakhukhi abekwe kudivayisi yokugcina yomsebenzisi wewebhusayithi nawo angasetshenziswa ngabakhangisi nabalingani ababambisene nomnikazi wewebhusayithi.
Icubungula idatha yomuntu siqu, imininingwane emayelana namafomu
Imininingwane yomuntu siqu yabasebenzisi bewebhusayithi ingahle icutshungulwe nguMlawuli:
uma umsebenzisi wewebhusayithi evuma kuyo amafomu athumele kuwebhusayithi, ukuze athathe izinyathelo ezihambelana nalawo mafomu (i-Article 6 (1) (a) ye-GDPR) noma
lapho ukucubungula kudingekile ekusebenzeni kwenkontileka lapho umsebenzisi wewebhusayithi eyiqembu (Isigaba 6 (l) (b) se-GDPR), uma iwebhusayithi inika isiphelo sesivumelwano phakathi koMlawuli nomsebenzisi wewebhusayithi.
Njengengxenye yewebhusayithi, idatha yomuntu siqu icutshungulwa kuphela ngokuzithandela ngabasebenzisi bewebhusayithi. Umlawuli ucubungula idatha yomuntu siqu yabasebenzisi bewebhusayithi kuphela ngezinga elidingekayo ngezinhloso ezibekwe ku-iphuzu 1 lit. a futhi b ngenhla nangesikhathi esidingekayo ukufeza lezi zinhloso, noma kuze kube lapho umsebenzisi wewebhusayithi ehoxisa imvume yakhe. Ukwehluleka ukuhlinzeka ngemininingwane ngumsebenzisi wewebhusayithi, kwezinye izimo, kungaholela ekwehlulekeni ukufezekisa izinhloso ezidingekayo zokuhlinzeka ngemininingwane.
Imininingwane yomuntu siqu elandelayo yomsebenzisi wewebhusayithi ingahle iqoqwe njengengxenye yamafomu athunyelwe kuwebhusayithi noma ukuze enze izinkontileka ezingaphethwa njengengxenye yewebhusayithi: igama, isibongo, ikheli, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, ukungena ngemvume, iphasiwedi.
Imininingwane equkethwe amafomu, enikezwe uMlawuli ngumsebenzisi wewebhusayithi, ingahle idluliselwe ku-Administrator iye kumaqembu wesithathu abambisana noMlawuli maqondana nokuqaliswa kwezinjongo ezibekwe ku-iphuzu 1 lit. a no-b ngenhla.
Imininingwane enikezwe amafomu kwiwebhusayithi icutshungulwa ngezinhloso ezivela ekusebenzeni kwefomu elithile, ngaphezu kwalokho, zingasetshenziswa yi-Administrator futhi ngezinjongo zokugcina umlando nezezibalo. Imvume yesihloko sedatha ivezwa ngokubheka iwindi elifanele lelo fomu.
Umsebenzisi wewebhusayithi, uma iwebhusayithi inezinto ezisebenzayo, ngokukhetha iwindi elifanele kwifomu lokubhalisa, angenqaba noma avume ukuthola imininingwane yezentengiselwano ngokusebenzisa izindlela zokuxhumana nge-elekhthronikhi, ngokuya nge-Act of 18 Julayi 2002 on the services of electronic ( I-Journal of Laws ka-2002, No. 144, into 1024, njengoba ichitshiyelwe). Uma umsebenzisi wewebhusayithi evumile ukuthola imininingwane yezentengiselwano ngokuxhumana nge-elekhtronikhi, unelungelo lokuyihoxisa leyo mvume nganoma yisiphi isikhathi. Ukusetshenziswa kwelungelo lokuhoxisa imvume yokuthola imininingwane yezentengiselwano kwenziwa ngokuthumela isicelo esifanelekile nge-imeyili ekhelini lomnikazi wewebhusayithi, kubandakanya negama nesibongo somsebenzisi wewebhusayithi.
Imininingwane enikezwe amafomu ingadluliselwa kuzinkampani ezihlinzeka ngezinsizakalo ezithile - ikakhulukazi, lokhu kusebenza ekudlulisweni kwemininingwane ephathelene nomnikazi wesizinda esibhalisiwe kuzinkampani ezingabasebenzisi besizinda se-Intanethi (ikakhulukazi abasebenza ngeSayensi neZemfundo yeKhompiyutha ye-Computer jbr - NASK), izinsizakalo zokukhokha noma ezinye izinto, lapho uMlawuli ebambisana khona kulokhu.
Imininingwane yomuntu uqobo yabasebenzisi bewebhusayithi igcinwa database lapho kusetshenziswe izinyathelo zobuchwepheshe nenhlangano ukuqinisekisa ukuvikelwa kwedatha ecutshungulwe ngokuya ngezidingo ezibekwe kwimithetho efanele.
Ukuze uvimbele ukubhaliswa kabusha kwabantu ababambe iqhaza kwiwebhusayithi inqanyulwe ngenxa yokusebenzisa okungagunyaziwe kwezinsizakalo zewebhusayithi, uMlawuli angenqabile ukususa imininingwane yomuntu siqu edingekayo ukuvimba amathuba okubhaliswa kabusha. Isisekelo esingokomthetho sokwenqaba yi-Art. 19 isigaba 2 iphuzu 3 maqondana ne-Art. 21 sec. 1 woMthetho kaJulayi 18, 2002 ngokuhlinzekwa kwezinsizakusebenza ze-elekthronikhi (okusho ukuthi ngo-Okthoba 15, 2013, i-Journal of Laws ka-2013, into 1422). Ukwenqaba kuka-Administrator ukususa idatha yomuntu siqu yabasebenzisi bewebhusayithi kungenzeka nakwezinye izimo ezinikezwe ngumthetho.
Ezimweni ezinikezwe umthetho, uMlawuli angadalula eminye imininingwane yomuntu uqobo yabasebenzisi bewebhusayithi kubantu besithathu ngezinhloso ezihlobene nokuvikelwa kwamalungelo abantu besithathu.
Umlawuli unelungelo lokuthumela ama-imeyili kubo bonke abasebenzisi bewebhusayithi ngezaziso mayelana nezinguquko ezibalulekile kwiwebhusayithi nangoshintsho kule Nqubomgomo Yobumfihlo. Umlawuli angathumela izincwadi ze-elekthroniki ezentengiso, ikakhulukazi izikhangiso kanye nolunye ulwazi lokuhweba, inqobo nje uma umsebenzisi wewebhusayithi evumile kuyo. Izikhangiso nolunye ulwazi lokuthengisa nalo lunganamathiselwa ezinhlamvwini ezingenayo naphumayo ezivela ku-akhawunti yohlelo.
Amalungelo wabasebenzisi bezinsizakalo maqondana nedatha yabo yomuntu ngokuya ngobuciko. 15 - 22 GDPR, umsebenzisi ngamunye wewebhusayithi unamalungelo alandelayo:
Ilungelo lokuthola idatha (i-Article 15 ye-GDPR)Isihloko sedatha sinelungelo lokuthola kusiqinisekiso se-Administrator ukuthi ngabe imininingwane yomuntu ephathelene naye iyacutshungulwa, futhi uma kunjalo, ukufinyelela kuyo. Ngokusho kuka-Art. Umphathi uzohlinzeka ngesihloko sedatha ngekhophi ledatha yomuntu siqu esetshenziswayo.
Ilungelo lokulungisa idatha (i-Article 16 ye-GDPR)Isihloko sedatha sinelungelo lokucela uMlawuli ukuthi alungise ngokushesha imininingwane yomuntu engalungile ephathelene naye.
Ilungelo lokususa idatha ("ilungelo lokukhohlwa") (Isigaba 17 se-GDPR)Isihloko sedatha sinelungelo lokucela uMlawuli ukuthi asuse imininingwane yakhe ngokushesha, futhi uMlawuli uphoqelekile ukuthi asuse idatha yomuntu siqu ngaphandle kokubambezeleka okungafanele uma kwenzeka esinye salezi zimo ezilandelayo:
imininingwane yomuntu siqu ayisadingeki ngezinhloso ezaziqoqelwe zona noma zalungiswa ngenye indlela;
isihloko sedatha sikhiphe imvume okusetshenzelwe kuyo ukucubungula
izinto zedatha eziqukethwe ekucutshungweni okususelwe ku-Art. 21 sec. 1 ngokumelene nokusebenza futhi azikho izizathu ezivunyelwe zokucutshungulwa
Ilungelo lokukhawulelwa kokusebenza (i-Article 18 ye-GDPR)Isihloko sedatha sinelungelo lokucela uMlawuli ukuthi anciphise ukucubungula kumacala alandelayo:
Uma idatha ingalungile - ngesikhathi sokuyilungisa
Isihloko sedatha siphikisile ngokulandela Ubuciko. 21 amasekhondi 1 ngokumelene nokusebenza - kuze kube kunqunywa ukuthi izizathu ezisemthethweni zoMlawuli ziyazibhala yini izizathu zokuphikiswa kwesihloko sedatha.
Ukucubungula akukho emthethweni futhi isihloko sedatha siphikisana nokususwa kwemininingwane yomuntu siqu futhi sicele ukunqunyelwa kokusebenzisa kwabo esikhundleni salokho.
5. Ilungelo lokuthwalwa kwedatha (art. 20 GDPR)Isihloko sedatha sinelungelo lokuthola, ngendlela ehlelekile, esetshenziswa kakhulu, efundeka ngomshini, imininingwane yomuntu siqu ephathelene naye, ayinikeza uMlawuli, futhi inelungelo lokuthumela le datha yomuntu siqu komunye umphathi ngaphandle kwezithiyo ezingxenyeni zoMlawuli lapho le datha yomuntu uqobo inikezwe kuye. Isihloko sedatha sinelungelo lokucela ukuthi idatha yomuntu siqu ithunyelwe nguMlawuli ngokuqondile komunye umphathi, uma kungenzeka ngokwezobuchwepheshe. Umthetho okukhulunywa ngawo kulesi sigaba ungeke uthinte kabi amalungelo nenkululeko yabanye.
6. Ilungelo lokuphikisa (Ubuciko 21 GDPR)Uma imininingwane yomuntu icutshungulwa ngezinjongo zokumaketha eziqondile, isihloko sedatha sinelungelo lokuphikisana nganoma yisiphi isikhathi ekucutshungulweni kwedatha yakhe yomuntu siqu ngezinhloso zokumaketha okunjalo, kufaka phakathi ukuphrinta, kuze kube yilapho ukucubungula kuhlobene nalokhu kumaketha okuqondile. .
Ukuqaliswa kwamalungelo angenhla abasebenzisi bewebhusayithi kungenzeka kwenzeke ngokuqhathaniswa nokukhokha ezimweni lapho umthetho osetshenziswayo uhlinzeka khona.
Uma kwenzeka kwephulwa amalungelo angenhla noma umsebenzisi wewebhusayithi ethola ukuthi imininingwane yakhe uqobo icutshungulwa yi-Administrator ngokungahambisani nomthetho osebenzayo, umsebenzisi wewebhusayithi unelungelo lokufaka isikhalazo kugatsha lokuqondisa.
Ngokwenqubo eyamukelekayo yamawebhusayithi amaningi, opharetha bewebhusayithi bagcina imibuzo ye-http eqondiswe kwiseva yomhlinzeki wewebhusayithi (imininingwane ngokuziphatha kwabanye abasebenzisi bewebhusayithi ifakiwe kuhlu lweseva). Izinsizakusebenza zikhonjwe ngamakheli we-URL. Uhlu oluqondile lolwazi olugcinwe kumafayela wewebhu we-web limi ngale ndlela elandelayo:
ikheli le-IP lomphakathi lekhompyutha lapho kuphume khona uphenyo,
Igama lesiteshi sekhasimende - ukuhlonza okwenziwe ngumthetho olandelwayo we-http, uma kungenzeka,
igama lomsebenzisi wewebhusayithi olunikezwe kwinqubo yokugunyazwa (ukungena ngemvume),
Ikhodi yokusabela ye-http,
inani lamabhayithi athunyelwe yiseva,
Ikheli le-URL lekhasi elihanjelwe ngaphambilini ngumsebenzisi wewebhusayithi (isixhumanisi sereferensi) - uma iwebhusayithi ifinyelelwe ngesixhumanisi,
imininingwane mayelana nesiphequluli sewebhu somsebenzisi sewebhu,
ulwazi ngamaphutha enzekile ngenkathi kwenziwa umsebenzi we-http.
Idatha engenhla ayihlotshaniswa nabantu abathile ababhekabheka amakhasi atholakala kuwebhusayithi. Ukuze uqinisekise ikhwalithi ephezulu kakhulu yewebhusayithi, umphathi wewebhusayithi uhlaziya ngezikhathi ezithile amafayela okungena ukuthola ukuthi yimaphi amakhasi ngaphakathi kwewebhusayithi evakashelwa kaningi, iziphi iziphequluli zewebhu ezisetshenziswayo, noma ngabe isakhiwo sewebhusayithi sinamaphutha, njll.
Izingodo eziqoqwe yisisebenzisi zigcinwa isikhathi esingapheli njengezinto ezisizayo ezisetshenziselwa ukuphathwa kahle kwewebhusayithi. Imininingwane equkethwe kuyo ngeke idalulwe kunoma yiziphi izinto ezingekho opharetha noma izinhlangano ezihlobene nomhlinzeki uqobo, ngenhloko-dolobha noma ngokwesivumelwano. Ngokusekelwe olwazini oluqukethwe kulawa mafayela, izibalo zingenziwa ukusiza ukuphatha iwebhusayithi. Ukufingqa okuqukethe lezi zibalo akunazici ezikhomba izivakashi zewebhusayithi.
© I-2020 IDOLOBHA YENDAWO Yomuzi |Inqubomgomo Yobumfihlo
Imininingwane yakho izosetshenziselwa ukucubungula i-oda lakho, ukuphatha ukuvakashelwa kwakho kuwebhusayithi yethu nezinye izinjongo njengoba kushiwo kweyethu Inqubomgomo yobumfihlo .
Ngifundile futhi ngamukela imithethonqubo yewebhusayithi